Skyline Simulation dia nampiseho sary WIP sasantsasany momba ny fahitany an'i Cincinnati / Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Kentucky Avaratra (KCVG) ho an'ny MSFS 2020.
Cincinnati / Northern Kentucky International Airport dia seranam-piaramanidina iraisampirenena ho an'ny daholobe miorina ao Hebron, Kentucky, Etazonia. Izy io dia manompo ny faritry ny renivohitra Greater Cincinnati. Ny kaodin'ny seranam-piaramanidina, CVG, dia avy amin'ny tanàna akaiky indrindra amin'ny fotoana hanokafana azy, Covington, Kentucky. Ny CVG dia mirefy 7,700 50 hektara ary ny seranam-piara-manidina dia misy fantsona iray sy kambana roa miaraka am-bavahady XNUMX. Ireo nosy roa ireo dia nosy ary tsy azon'ny mpandeha an-tany mivezivezy na manetsiketsika ny olona.